Bit By Bit - ဆိုင်ရာကိုယ်ကျင့်တရား - 6.4.2 ကောင်းတဲ့
ကောင်းတဲ့အသိနားလညျအကွောငျးဖွစျသညျနှငျ့သငျ့လေ့လာမှု၏အန္တရာယ်ကို / အကျိုးကျေးဇူးပရိုဖိုင်းကိုတိုးတက်အောင်, ပြီးတော့သူကညာဘက်ကိုချိန်ခွင်လျှာရိုက်လျှင်ဆုံးဖြတ်ခြင်း။
(1) မထိခိုက်ဘူးနှင့် (2) ဖြစ်နိုင်ခြေအကျိုးကျေးဇူးများကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ဖြစ်နိုင်သမျှပျက်ဆီး minimize: အဆိုပါ Belmont အစီရင်ခံစာကောင်းတဲ့၏နိယာမသုတေသီများသင်တန်းသားများရန်ရှိသည်ထားတဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်အပိုင်းနှစ်ပိုင်းကပါဝငျကြောင်းကိုစောဒကတက်သည်။ အဆိုပါ Belmont အစီရင်ခံစာဆေးပညာကျင့်ဝတ်အတွက် Hippocratic အစဉ်အလာရန် "မထိခိုက်ပါဘူး" ၏စိတ်ကူးနှင့်ပတ်သက်နှင့်သုတေသီများက "မခွဲခြားဘဲအခြားသူများလာအံ့သောငှါအကြိုးကြေးဇူးမြား၏လူတစ်ဦးထိခိုက်မဖြစ်သင့်" တဲ့ခိုင် form မှာဖျောပွနိုငျ (Belmont Report 1979) သို့သော် Belmont အစီရင်ခံစာလည်းအကျိုးရှိသည်အဘယ်သို့သင်ယူခြင်းအန္တရာယ်မှလူတချို့ဖော်ထုတ်ပါဝင်စေခြင်းငှါအသိအမှတ်ပြုပါတယ်။ ထိုကွောငျ့, မခိုလုပ်နေ၏အရေးကြီးသောပါဝင်ပတ်သက်အန္တရာယ်များကြားမှကြောင့်အချို့သောအကြိုးခံစားခှငျ့ကိုရှာမိတာအခါ "အကြောင်းရံဖန်ရံခါခက်ခဲဆုံးဖြတ်ချက်တွေလုပ်သုတေသီများဦးဆောင်, သင်ယူဖို့အလွန်အရေးကြီးသည်နှင့်အတူပဋိပက္ခများအတွက်ဖြစ်နိုင်ပြီး, အကျိုးကျေးဇူးများကြောင့်၏လွှတ်ရပါမည်သည့်အခါ အန္တရာယ်များ။ " (Belmont Report 1979)
တစ်ဦးစွန့်စား / အကျိုးကျေးဇူးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထို့နောက်အန္တရာယ်များနှင့်အကျိုးခံစားခွင့်အနေနဲ့သင့်လျော်သောကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာချိန်ခွင်လျှာဒဏ်ခတ်ခြင်းရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်. ဆုံးဖြတ်ချက်: အလေ့အကျင့်၌, ကောင်းတဲ့၏နိယာမသုတေသီများနှစ်ခုသီးခြားလုပ်ငန်းစဉ်များဆောင်ရွက်ရန်သင့်ကြောင်းဆိုလိုဘတ်သိရသည်။ ဤပထမလုပ်ငန်းစဉ်တွေအကြီးအကျယ်ထိရောက်သောကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်သောနည်းပညာကိစ္စဖြစ်ပြီး, ဒုတိယအကြီးအကျယ်ထိရောက်သောကျွမ်းကျင်မှုနည်းပါးတန်ဖိုးရှိသောသို့မဟုတ်ပင်ထိခိုက်စေခြင်းငှါအဘယ်မှာရှိတစ်ဦးကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦးကစွန့်စားမှု / အကျိုးကျေးဇူးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနားလည်မှုနှင့်တစ်ဦးလေ့လာမှု၏အန္တရာယ်များနှင့်အကျိုးခံစားခွင့်တိုးတက်လာနှစ်ဦးစလုံးပါဝငျသညျ။ ဆိုးရွားသောဖြစ်ရပ်များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်ထိုဖြစ်ရပ်များ၏ပြင်းထန်မှု: အန္တရာယ်ကို၏ analysis နှစ်ခု element တွေပါဝင်သင့်သည်။ ဒါကြောင့် (ဥပမာအားအကြံပေးခြင်းရရှိနိုင်ပါစေတွေ့ရှိလျှင်ဤအဆင့်စဉ်အတွင်းဥပမာ, တစ်သုတေသီ (ဥပမာ, အားနည်းချက်နေသောသင်တန်းသားများကိုထွက်ပြ) တစ်ဦးဆိုးရွားသောဖြစ်ရပ်များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုလျှော့ချသို့မဟုတ်ဆိုးရွားသောဖြစ်ရပ်၏ပြင်းထန်မှုကိုလျှော့ချဖို့လေ့လာမှုဒီဇိုင်းကိုချိန်ညှိနိုင် ထိုသို့တောင်းခံတဲ့သူသင်တန်းသားများ) ။ ထို့ပြင်ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကာလအတွင်းသုတေသီများစိတျထဲမှာသင်တန်းသားများပေါ်, ဒါပေမယ့်လည်းမဟုတ်သောသင်တန်းသားများနှင့်လူမှုရေးစနစ်များအပေါ်ရုံသာမကသူတို့၏အလုပ်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုစောင့်ရှောက်ဖို့လိုပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, Restivo နှင့်ဗန်က de Rijt အားဖြင့်စမ်းသပ်မှုထည့်သွင်းစဉ်းစား (2012) ဝီကီပီးဒီးယားအယ်ဒီတာများ (အခန်း4မှာဆွေးနွေးကြသည်) မှာဆု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအပေါ်။ ဒီစမ်းသပ်မှုမှာ, သုတေသီသူတို့ထိုက်တန်ဟုယူဆပြီးတော့သုတေသီတစ်ဦးချီးမြှင့်ပေးမပေးတော်မူသောအားညီတူညီမျှထိုက်သောအယ်ဒီတာများ၏ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဝီကီပီးဒီးယားသူတို့ရဲ့ပံ့ပိုးမှုများကိုခြေရာခံသောသူအချို့အယ်ဒီတာများမှဆုပေး၏။ ဒီအထူးသဖြင့်လေ့လာမှုမှာ, သူတို့ ပေး. ဆုအရေအတွက်ငယ်ပေမယ်သုတေသီများကတစ်ဦးချင်းစီကသူတို့ကိုမဆိုထိခိုက်ခြင်းမရှိဘဲအယ်ဒီတာများ၏ရပ်ရွာနှောင့်အယှက်နိုင်ဆုနှင့်အတူဝီကီပီးဒီးယားရေလွှမ်းခဲ့မယ်ဆိုရင်။ စွန့်စားမှု / အကျိုးကျေးဇူးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလုပ်နေသည့်အခါတစ်နည်းအားဖြင့်သင်ပိုမိုအမြင်ကျယ်သင်တန်းသားများပေါ်ပေမယ့်ကမ္ဘာကအပေါ်ရုံသာမကသင့်ရဲ့အလုပ်၏သက်ရောက်မှုကိုစဉ်းစားသင့်ပါသည်။
အန္တရာယ်များလျော့ချခဲ့ကြနှင့်အကျိုးခံစားခွင့် A မြင့်ဆုံးတစ်ချိန်က Next ကို, သုတေသီများလေ့လာချက်တစ်ခုအဆင်သင့်ချိန်ခွင်လျှာရိုက်ရှိမရှိအကဲဖြတ်သင့်ပါတယ်။ Ethicists ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အကျိုးအမြတ်၏ရိုးရှင်း summation ဖို့အထူးအကြံပြုလိုတယ်ကြပါဘူး။ အထူးသဖြင့်, အခြို့အန္တရာယ်များကိုအဘယ်သူမျှမ (ဥပမာ, အ Tuskegee ဆစ်ဖလစ်လေ့လာမှုသမိုင်းဆိုင်ရာနောက်ဆက်တွဲတွင်ဖော်ပြ) အကြိုးခံစားခှငျ့အရေး impermissible သုတေသနဆပ်။ အဓိကအားနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာသောစွန့်စားမှု / အကျိုးကျေးဇူးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, မတူဘဲဤဒုတိယခြေလှမ်းနက်ရှိုင်းစွာကျင့်ဝတ်နှင့်တကယ်တော့သီးခြားဘာသာရပ်-ဧရိယာကျွမ်းကျင်မှုရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးသူကလူအားဖြင့်ကြွယ်ဝပြည့်စုံလိမ့်မည်။ အပြင်လူမကွာခဏအတွင်းကနေမတူညီတဲ့အရာသတိထားမိသောကြောင့်, တကယ်တော့, US မှာ IRBs အနည်းဆုံး Non-သုတေသီရှိသည်ဖို့လိုအပ်သည်။ တစ်ဦး IRB အပေါ်ထမ်းဆောင်ငါ၏အတှေ့အကွုံမြားတှငျဤအပြင်ကလူအုပ်စု-ထင်ကာကွယ်ဘို့အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့သုတေသနစီမံကိန်းတခုသင့်လျော်သောစွန့်စားမှု / အကျိုးကျေးဇူးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရိုက်ရှိမရှိဒုက္ခဆုံးဖြတ်ခြင်းရှိခြင်းလျှင်ပဲအချို့ကို non-သုတေသီများတောင်းကြိုးစားကြည့်ပါ, သင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်မမေးဘူး, သူတို့ရဲ့အဖြေကိုသင်အံ့သြသွားပေလိမ့်မည်။
သုံးယောက်ဥပမာဖို့ကောင်းတဲ့၏နိယာမလျှောက်ထားလေ့လာမှုတစ်ခုကစတင်ခဲ့သည်ခင်မှာအန္တရာယ်များအကြောင်းကိုသိသိသာသာမသေချာမရေရာမကြာခဏလည်းမရှိဆိုတဲ့အချက်ကိုမီးမောင်းထိုးပြ။ ဥပမာအားဖြင့်, သုတေသီ၎င်းတို့၏လေ့လာမှုများကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့နိုင်သောဆိုးရွားသောဖြစ်ရပ်များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေသို့မဟုတ်ပြင်းအားမသိခဲ့ပါ။ ဤသည်မသေချာမရေရာဒီဂျစ်တယ်ခေတ်သုတေသနလုပ်ငန်းအတွက်အမှန်တကယ်အတော်လေးဘုံဖြစ်ပါသည်, နောက်ပိုင်းတွင်ဤအခနျး၌ငါသည်မရေရာမှု (ပုဒ်မ 6.6.4) ၏မျက်နှာ၌ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမချ၏စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုတစ်ခုလုံးကိုအပိုင်းမွှုပျနှံပါလိမ့်မယ်။ သို့သော်ကောင်းတဲ့အများ၏မူအရသူတို့၏စွန့်စား / အကျိုးကျေးဇူးချိန်ခွင်လျှာတိုးတက်လာဖို့ကဤလေ့လာမှုများမှလုပ်စေခြင်းငှါအပြောင်းအလဲတချို့အကြံပြုပါဘူး။ ဥပမာအားဖြင့်, စိတ်ခံစားမှုဘယ်လိုကူးစက်အတွက်, သုတေသီအသက် 18 နှစ်နှင့်ကုသမှုဖို့ဆိုးဆိုးဝါးဝါးတုံ့ပြန်ရန်အထူးသဖြင့်ဖွယ်ရှိစေခြင်းငှါအဘယ်သူသည်လူအောကျကလူထွက်ပြဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါပြီနိုင်။ သူတို့ကအစထိရောက်စာရင်းအင်းနည်းလမ်းများ (အခန်း4မှာအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့) ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သင်တန်းသားများ၏အရအေတှကျ minimize ဖို့ကြိုးစားနိုင်တယ်။ ထို့ပြင်သူတို့သင်တန်းသားများကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ကြိုးစားခဲ့နှင့်ထိခိုက်နိုင်ခဲ့ကြသည်ထင်ရှားကြောင်းမည်သူမဆိုကူညီဆက်ကပ်နိုင်။ သူတို့က data တွေကိုပြန်လွှတ်ပေးခဲ့သောအခါ (မိမိတို့အလုပျထုံးလုပျနညျးသူတို့ထိုအချိန်ကဘုံအလေ့အကျင့်များနှင့်ကိုက်ညီခဲ့ကြကြောင်းအကြံပြုသောဟားဗတ်ရဲ့ IRB ကအတည်ပြုခဲ့ကြသည်ပေမဲ့) မြည်းစမ်း, ဆက်ဆံရေး, နှင့် Time ခုနှစ်, သုတေသီအရပျ၌အပိုအကာအကွယ်ထားကြပြီနိုင်ကြောင်း, ငါအချက်အလက်ဆိုင်ရာအန္တရာယ် (ပုဒ်မ 6.6.2) ကိုဖော်ပြရန်သောအခါငါနောက်ပိုင်းတွင်အခနျးမှာဒေတာကိုလွှတ်ပေးရန်နှင့် ပတ်သက်. အချို့သောပိုပြီးတိကျတဲ့အကြံပြုချက်များကိုပူဇော်ပါလိမ့်မယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ Encore အတွက်, သုတေသီစီမံချက်၏တိုင်းတာခြင်းရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်အောင်မြင်ရန်အလို့ငှာနေသူများကဖန်တီးသောအန္တရာယ်များတောင်းဆိုမှုများ၏အရအေတှကျ minimize ရန်ကြိုးစားခဲ့ကြပါပြီနိုင်ကြောင်း, သူတို့သည်ဖိနှိပ်အစိုးရများကနေအန္တရာယ်အများဆုံးဖြစ်ကြောင်းသင်တန်းသားများကိုဖယ်ထုတ်နိုင်တယ်။ ဤသူဖြစ်နိုင်သောအပြောင်းအလဲများတစ်ခုချင်းစီသည်ဤစီမံကိန်းများ၏ဒီဇိုင်းပုံစံသို့ trade-off မိတ်ဆက်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း, ငါ့ရည်မှန်းချက်ကဤသုတေသနပညာရှင်များကဤပြောင်းလဲစေပြီသင့်ကြောင်းအကြံပြုသည်မဟုတ်။ အဲဒီအစား, ငါ့ရည်မှန်းချက်ကောင်းတဲ့၏နိယာမအကြံပြုနိုငျသောအပြောင်းအလဲများ၏မျိုးကိုပြသသည်။
ဒီဂျစ်တယ်ခေတ်ယေဘုယျအားဖြင့်ထိုအန္တရာယ်များနှင့်အကျိုးခံစားခွင့်များအလေးချိန်ပိုမိုရှုပ်ထွေးစေတော်မူပြီဖြစ်သော်လည်းနောက်ဆုံးတွင်ကြောင့်အမှန်တကယ်ကပိုမိုလွယ်ကူသုတေသီများက၎င်းတို့၏အလုပ်၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုတိုးမြှင့်ရန်အဘို့အစေတော်မူပြီ။ အထူးသဖြင့်, ဒစ်ဂျစ်တယ်အသက်ကိရိယာကိုအလွန်သုတေသီများအခြားသုတေသီများသူတို့ရဲ့သုတေသနလုပ်ငန်း data နဲ့ code ကိုရရှိနိုင်ပါစေနှင့်ပွင့်လင်း access ကိုထုတ်ဝြေခင်းအားဖြင့်အများပြည်သူကသူတို့ရဲ့စာတမ်းများရရှိနိုင်ပါစေဘယ်မှာပွင့်လင်းခြင်းနှင့် reproducible သုတေသန, လွယ်ကူချောမွေ့။ ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့် reproducible သုတေသနဤပြောင်းလဲမှုမရှိ, အားဖြင့်ရိုးရှင်းတဲ့ဆိုလိုသည်နေစဉ်, မည်သည့်အပိုဆောင်းအန္တရာယ်မှသင်တန်းသားများကိုဖော်ထုတ်မပါဘဲ၎င်းတို့၏သုတေသနပြုမှု၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုတိုးမြှင့်ဖို့သုတေသီများဘို့လမ်းကိုကမ်းလှမ်း (Data ခွဲဝေမှုသတင်းအချက်အလက်ပေါ်အပိုင်းထဲမှာအသေးစိတ်ဆွေးနွေးတင်ပြပါလိမ့်မည်သည့်ချွင်းချက်ဖြစ်ပါသည် စွန့်စားမှု (ပုဒ်မ 6.6.2)) ။